Nhau - Iyo Yakazara Nhungamiro Yekusapinda Mvura IP Rating - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7
Iwe unogona kunge wakasangana nezvigadzirwa zvine mucherechedzo pazviri kana pakurongedzerwa kwavo, seIP44, IP54, IP55 kana zvimwe zvakafanana. Asi unoziva here kuti izvi zvinorevei? Zvakanaka, iyi kodhi yepasirese inomiririra mwero wekudzivirira wechigadzirwa kubva mukupinzwa kwezvinhu zvakasimba uye zvinwiwa. Muchikamu chino tichatsanangura zvinorehwa neIP, kuverenga iyo kodhi uye zvakare kutsanangura mune zvakadzama matanho ekudzivirira akasiyana.
IP Rating Checker Unoda kuziva kuti IP rating pane yako chigadzirwa zvinorevei? Shandisa iyi cheki uye icharatidza mwero wekudzivirira.
Chigadzirwa chine IP00 chiyero hachina kudzivirirwa kubva kuzvinhu zvakasimba uye hachina kudzivirirwa kubva kune zvinwiwa.
Chii chinonzi IP Rating chinorevei? IP Rating zvinoreva Ingress Dziviriro Rating (Inozivikanwawo seInternational Kudzivirirwa Kumaka) iyo inomiririra kodhi iyo mugadziri anofanirwa kudoma kuitira kuti mutengi azive kana chigadzirwa chakadzivirirwa kubva mukupinzwa kwezvakaoma-nyika zvimedu kana zvimedu zvemvura. Kuyerwa kwenhamba kunobatsira vanhu kutarisira zvirinani zvigadzirwa zvavanotenga uye kuziva nzira yekuzvichengeta mumamiriro akakodzera. Vazhinji vagadziri vemagetsi vanotsanangura zvakadzama zvine chekuita nezvigadzirwa zvavo, asi iyo IP Rating ingave nyore kunzwisisa kana vanhu vakaziviswa nezvazvo. Iyo IP kodhi chishandiso chakajeka chinogona kubatsira chero munhu kutenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, pasina kutsauswa nejagoni uye zvisina kujeka zvakatemwa. Ingress Dziviriro chiyero chakajairwa chinozivikanwa pasi rese icho chero munhu anogona kushandisa, zvisinei nenzvimbo yavo. Aya mazinga e electrotechnology akagadzirwa kuti aite kuti vanhu vazive kuti bhokisi rechigadzirwa rinei, kubva mumvura kuenda kune yakasimba kuchengetedza chinhu. Iko code inoratidzika seyiyi: ipfupi shanduro yeIngress Protection, iyo IP, inoteverwa nemadijiti maviri kana tsamba X. Nhamba yekutanga inomiririra kushorwa kwechinhu kupikisa zvinhu zvakasimba, nepo yechipiri inomiririra dziviriro inopiwa kune zvinwiwa. Tsamba X inoreva kuti chigadzirwa hachina kuyedzerwa chikamu chakasiyana (chingave chakaoma kana zvinwiwa). Solid Object Protection Kudzivirirwa kwechigadzirwa kubva kune yakasimba-state zvinhu zvinoreva kupinda kwezvikamu zvine njodzi mukati mechigadzirwa. Nzvimbo yacho inobva pa0 kusvika pa6, apo 0 inoreva kuti hapana dziviriro zvachose. Kana chigadzirwa chacho chine chinhu chakasimba chekudzivirira che1 kusvika ku4, chinodzivirirwa kubva kune zvinhu zvinopfuura 1mm, kubva pamaoko neminwe kusvika kune zviduku zviduku kana waya. Iyo shoma dziviriro inokurudzirwa ndeye IP3X chiyero. Kuti dzidzivirire kubva kuguruva, chigadzirwa chinofanirwa kuve neinenge IP5X chiyero. Kupinda kweguruva ndicho chikonzero chikuru chekukuvadza maererano nemagetsi, saka kana chigadzirwa chichida kushandiswa munzvimbo dzine guruva, IP6X, iyo yakanyanya kuchengetedzwa inovimbiswa, inofanira kuva yekuwedzera. Izvi zvinonziwo intrusion protection. Izvo zvakakosha kuti usarudze iyo yakanyanya kufanira IP Rating yechigadzirwa chemagetsi, sezvo izvi zvichipesvedzera kuramba kwechigadzirwa kune inochajwa magetsi kubata, izvo zvinogona kutungamira mukukuvadzwa kwechigadzirwa nenguva. Zvinhu zvemagetsi izvo zvakafukidzwa mumafirimu akaonda epolymeric anopokana neguruva mamiriro ezvakatipoteredza kwenguva yakareba.
0 - Hapana dziviriro yakavimbiswa
1 - Dziviriro yakavimbiswa kubva kune yakasimba zvinhu zvinodarika 50mm (semuenzaniso maoko).
2 - Dziviriro yakavimbiswa kubva kune yakasimba zvinhu zvinodarika 12.5mm (semuenzaniso zvigunwe).
3 - Dziviriro inovimbiswa kubva kune yakasimba zvinhu zvinodarika 2.5mm (semuenzaniso waya).
4 - Dziviriro inovimbiswa kubva kune yakasimba zvinhu zvinodarika 1mm (semuenzaniso maturusi newaya diki).
5 - Yakadzivirirwa kubva kuhuwandu hweguruva inogona kukanganisa kushanda kwakajairika kwechigadzirwa asi isina kuzara guruva. Dziviriro yakakwana pazvinhu zvakasimba.
6 - Yakazara huruva yakasimba uye yakakwana kudzivirira kubva kune yakasimba zvinhu.
Liquids Ingress Dziviriro Zvimwe chetezvo kune zvinwiwa. Liquids Ingress Protection inozivikanwawo sekudzivirira hunyoro uye hutsika hunogona kuwanikwa pakati pe0 ne8. Imwe 9K yakawedzerwa munguva pfupi yapfuura kuIngress Protection code. Sezvambotaurwa pamusoro apa, 0 inoreva kuti chigadzirwa hachina kudzivirirwa nenzira ipi zvayo kubva pakupindira kwezvikamu zvemvura mukati mekesi. Zvigadzirwa zvisingapindi mvura hazvirambe zvichiramba kana zvakaiswa pasi pemvura kwenguva yakareba. Kuratidzwa kune mashoma emvura anokwana kukuvadza chigadzirwa chine yakaderera IP Rating. Unogona kunge wakasangana nezvigadzirwa zvine zviyero zvakaita seIPX4, IPX5 kana kunyange IPX7. Sezvambotaurwa, nhamba yekutanga inomiririra kuchengetedzwa kwechinhu chakasimba asi kazhinji vagadziri havaedze zvigadzirwa zvavo kuti guruva ripinde. Ndicho chikonzero nhamba yekutanga inongotsiviwa ne X. Asi izvi hazvirevi kuti chigadzirwa hachina kudzivirirwa kubva kuguruva. Kana iine dziviriro yakanaka kubva kumvura saka inogona kudzivirirwa kubva kuguruva zvakare. Chekupedzisira, kukosha kwe9K kunoreva zvigadzirwa zvinogona kucheneswa uchishandisa chiutsi uye kutsigira mhedzisiro yemajeti emvura anodzvanywa, zvisinei nekwaanobva. Sezvambotaurwa, kune chigadzirwa chakanyorwa seIPXX, hapana bvunzo dzakaitwa kuitira kuti zvionekwe kuti zvigadzirwa zvinodzivirira mvura uye guruva here kana kuti kwete. Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti XX rating haireve kuti chigadzirwa hachina kuchengetedzwa zvachose. Kubata mugadziri uye kugara uchiverenga gwaro remushandisi zvinosungirwa usati waisa mudziyo wemagetsi mumamiriro akakosha.
0 - Hapana dziviriro yakavimbiswa.
1 - Dziviriro yakavimbiswa kubva pamadonhwe akamira emvura.
2 - Dziviriro inovimbiswa kubva pamadonhwe akamira emvura kana chigadzirwa chakarereka kusvika 15 ° kubva pachinzvimbo chayo.
3 - Dziviriro yakavimbiswa kubva kune yakananga sprays yemvura chero kona kusvika 60 °.
4 - Dziviriro yakavimbiswa kubva pamvura inoputika kubva kune chero kona.
5 - Dziviriro yakavimbiswa kubva pajeti dzemvura dzinofungidzirwa nemuromo (6.3mm) kubva kune chero kona.
6 - Dziviriro yakavimbiswa kubva kune simba jets remvura rinofungidzirwa nemuromo (12.5mm) kubva kune chero kona.
7 - Dziviriro inovimbiswa kubva mukunyudzwa mumvura pakadzika pakati pe15 cm uye 1 mita kwepamusoro maminetsi makumi matatu.
8 - Dziviriro inovimbiswa kubva kune nguva refu yekunyudzwa mumvura pakadzika inopfuura 1 mita.
9K - Dziviriro yakavimbiswa kubva pamhedzisiro yeakakwira-kumanikidza emvura jets uye kuchenesa mhepo.
Zvinorehwa Nezvimwe Zvakajairwa IP Ratings
IP44 —— Chigadzirwa chine muyero weIP44 zvinoreva kuti chinodzivirirwa kubva kuzvinhu zvakasimba zvakakura kupfuura 1mm uye kupfachuka kwemvura kubva kumativi ese.
IP54 —— Chigadzirwa chine IP54 chiyero chinodzivirirwa kubva kuguruva ingress zvakakwana kudzivirira chigadzirwa kubva kushanda zvakajairika asi haina guruva. Chigadzirwa chacho chakachengetedzwa zvakakwana kubva kuzvinhu zvakasimba uye kupfachuka kwemvura kubva kune chero kona.
IP55 —— Iyo IP55 yakayerwa chigadzirwa inodzivirirwa kubva kuguruva ingress inogona kukuvadza kune yakajairika kushanda kwechigadzirwa asi isina kuzara guruva. Inodzivirirwa kubva kuzvinhu zvakasimba uye majeti emvura anoratidzwa nemhuno (6.3mm) kubva chero nzira.
IP65 —— Kana iwe ukaona IP65 yakanyorwa pachigadzirwa, zvinoreva kuti yakanyatso guruva uye yakachengetedzwa kubva kuzvinhu zvakasimba. Uyezve inodzivirirwa kubva kujeti dzemvura dzinofungidzirwa nemuromo (6.3mm) kubva kune chero kona.
IP66 —— Chiyero cheIP66 chinoreva kuti chigadzirwa chakachengetedzwa zvakakwana kubva kuguruva uye zvinhu zvakasimba. Uyezve, chigadzirwa chacho chinodzivirirwa kubva kune simba jeti remvura rinofungidzirwa nemuromo (12.5mm) kubva chero nzira.
IPX4 —— IPX4 yakayereswa chigadzirwa inodzivirirwa kubva kumvura inoputika kubva chero kona.
IPX5 —— Chigadzirwa chine chiyero cheIPX5 chinodzivirirwa kubva kujeti dzemvura dzinofungidzirwa nemhuno (6.3mm) kubva chero nzira.
IPX7 —— Chiyero cheIPX7 chinoreva kuti chigadzirwa chinogona kunyudzwa mumvura kwenguva inodarika maminitsi makumi matatu pakadzika pakati pe15cm kusvika 1m.